Plantain। आवेदन सीमित छैन।
सिलियम को औषधीय गुण बारे हामी सबै बाल्यकाल मा थाहा छ। कति पटक आफ्नो गोडा वा कुहिनो skinned तोडने, हामी plantain पात चलान मा tore, घाउ लागू र जरुरी छोराछोरीको मामिलासम्बन्धी थप भाग्यो थियो।
यो कि plantain उपचार गर्न सकिन्छ टमी बारेमा, विज्ञापन को शुरू अघि लामो थियो कि बाहिर जान्छ। इतिहासकारहरूले, archaeologists, pharmacologists मजबूती घाउ, आंत्र रोग को उपचार चिकित्सा को लागि प्रयोग प्राचीन को उपयोगी जडीबुटी कि, शरीर बलियो स्थापित।
यो साँच्चै उपयोगी plantain छ? यसको प्रयोग धेरै पोषक को कार्य मा आधारित छ: भिटामिन सी, K, अस्थिर, carotene, यसको संरचना समावेश। जादू जडिबुटी परम्परागत र वैकल्पिक चिकित्सा, कस्मेटिक्स, Homeopathy प्रयोग गरिन्छ। यो पनि चयापचय normalizes शरीर सबैभन्दा आवश्यक ट्रेस तत्व र भिटामिन भरिन्छ।
Plantain यो अक्सर सडक र ट्रेल्स साथ पाइन्छ भन्ने तथ्यलाई देखि आफ्नो नाम मिल्यो। यो बोट को 250 प्रजाति क्षेत्रहरू, खाली धेरै छ, वन clearings संसारभरि सामान्य छ। यसको सबै फरक भनिन्छ: semizhilnik, porannik, poputnik।
संयंत्र स्टेम र पात, को नुकीला समान को आधार देखि नग्न संग एक बारहमासी जडिबुटी छ। रंग plantain - कि गर्मी को बीचमा देखिन्छ एक स्पाइक।
औषधीय वा कस्मेटिक उद्देश्यका लागि plantain भनिन्छ वक्ता संग घाँस पात फसल। अनुप्रयोग पाइएन र छ सुकेको बीउ, जो3अधिक वर्ष को चिकित्सकीय गुण राख्ने।
Plantain रस expectorant कार्य छ कि धेरै दबाइहरु को भाग हो। यो एक घटक bronholitin bromhexine, Pertussin, धेरै अन्य औषधीको छ।
poputnika श्लेम लाग्एको पदार्थ मा धनी गैस्ट्रिक र आंतों सुनिंनु उपचार को लागि decoctions त तयार छन् छोड्छ। चिकित्सकहरु semizhilnikom व्यवहार gastritis प्रस्ताव। poputnika, cudweed, hypericum, centaury, knotweed को उपयुक्त संरचना,4भागहरु लिएको र टकसाल, yarrow, मिठाई, 1 भाग लिएको। पानी मिश्रण उम्लिरहेको अँध्यारो 10 घण्टा मा बनाउँने गर्नुपर्छ संग पीसा। खानाको पछि आधा एक गिलास को दैनिक खपत चाँडै दुखाइ को छुटकारा प्राप्त गर्न मदत गर्नेछ।
अल्सर पनि plantain मदत। एक उत्तराधिकारी, सैलंडन र स्टेटजोन्स wort साथ सँगै यो जडिबुटी प्रयोग एकदम रिकभरी गति अप। तपाईं एक spoonful एक दिन ताजा वा समर्थित रस पिउन भने, तपाईं संबंधी बृहदांत्रशोथ, dyspepsia हटाउनेछ प्राप्त गर्न सक्छन्। पातहरु को जलसेक दुर्बलता, ब्रोंकाइटिस, क्षयरोगका निको पार्न। sores, बल्न, abrasions mush राम्रो मा चोट ताजा पात निको।
पनि Cosmetologists plantain को धेरै रुचाउनु। मास्क, लोशन या क्रीम यो बोट को प्रयोग तपाईंको छाला उज्ज्वल, सफा र आकर्षक बनाउन हुनेछ। सुकेको पात को जलसेक पूर्ण रिफ्रेस र सुख्खा छाला nourishes, र सामान्य उमेर बढन छाला वा जलसेक को शुद्धीकरण लागि पानी मा तयार छ, infused दूध। मानिसहरू शेविंग पछि plantain को compresses लागू गर्न सक्नुहुन्छ - जलन ibavitsya राम्रो तरिका हो।
के अन्य क्षेत्रहरू plantain ज्ञात? धेरै को लागि समाचार - पकाउने यसको प्रयोग। तैपनि व्यञ्जन यो बिरूवा देखि एक लामो समय को लागि तयार पारे। यी खाद्य पदार्थ को लाभ घाँस यसको सबै निको गुण कायम रहन्छ, भन्न आवश्यक छैन, सही पकाएको।
अतिथिहरूको असामान्य चिया पत्ती semizhilnika, अजवायन र टकसाल Indulge गर्न सक्नुहुन्छ। Infused धेरै घन्टा decoction नियमित पिउन थप गर्न सकिन्छ, तर तपाईं बस बरफ संग पिउन सक्नुहुन्छ। अझ मसलादार सलाद plantain हुनेछ, nettle, अजवाइन, colza, quinoa र हरियो प्याज। यो सलाद मात्र कान्छो पात हुन सक्छ लागि बस लिन। को सूप वा सूप, पनि, सिलियम थप्न सक्नुहुन्छ। यो पकवान एक नरम ताजा स्वाद दिन हुनेछ।
सङ्कलन poputnik, हामी सडक को साथ बढ्दै घाँस, सबै हानिकारक पदार्थ अवशोषित कि सम्झना गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्न आवश्यक छैन।
पाइन तन्तु खोकी: एक फोटो सहितको नुस्खा
Smolka vulgaris - उपयोगी गुणहरु र लोक चिकित्सा मा आवेदन
Warts को उपचार को लागि प्रभावकारी लोक उपचार
ओछ्यान घाँस औषधीय गुण (फोटो)
तेजपात र चमत्कारी सम्पत्ति
बेहोशि औषधि हर्बल चिया: क्रममा ड्राइभ नसाहरू
घाँटी मा Inflamed लसीका नोड - गम्भीर चासो लागि एउटा कारण
17 मातृत्व अस्पताल लेस्नोजोवोदस्काया: फोटो, ठेगाना, समीक्षा, चीजहरूको सूची
अनन्तकालसम्म तरुण वर्ण - पत्रुस पान
अडिट प्रकार र आफ्नो विशेषताहरु
खाना विषाक्तता कसरी निर्मूल गर्न: पहिलो सहायता
Sergey Khudyakov। जीवनी Khudyakov सर्गेई Alexandrovich - एयर मार्शल। फोटो
Xiaomi फोन: प्रमाणीकरण र प्रमुख nuances
स्थिति र संकल्प नै मा Decomposed Tarot कार्ड
थाइल्याण्ड मा वर्षाको सिजन
डाइसिस्किन (ट्याबलेटहरू): तयारीको विवरण